Silicon Carbide Element, Silicon Carbide kululeeyaha - SICTECH
Wax soo saarkayagu si ballaaran ayaa loogu isticmaalay warshadaha daaweynta kuleylka sida muraayadaha, dhoobada, qalabka magnetka, metallurgy budada, loona dhoofiyo in ka badan 30 dal iyo gobollada adduunka.
Budada metallurgy sintering
Almiinka aluminium kala dirida, dahaadhka dahaarka, daweynta gabowga
Gawaarida gaaska iyo adkeynta gawaarida, diyaaradaha iyo qeybaha farsamada
Dareerida kaabayaasha dhoobada
Sintering alumina iyo talc
Kicinta walxaha piezoelectric
Shidaal ka mid ah substrate-ka IC
Shaandhaynta resistors dhoobada, kala-baxayaasha, heer-kul-dhaliyeyaasha
Fusion, ningax iyo tartiib tartiib ah galaaska
Daaweynta dusha sare ee muraayadda
Daaweynta kuleylka ee kareemada dareeraha ah
Ka shaqaynta muraayadaha
Soosaarida muraayadaha badbaadada
Shidaalka fosfoorasyada iyo midabbo kala duwan
Kuleylka gaaska firfircoon
Muxaadaro qalalan, coking, degreasing
Jiangsu Huanneng Silicon Carbon Ceramics Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2001, waxaan inta badan soo saarnaa waxyaabo heer kulkeedu sarreeyo oo kuleyliyaha carbide ah, Tan iyo markii aan aasaasnay, waxaan soo saareynay alaabooyin teknolojiyad iyo tayo sare leh leh ruuxa hal-abuurnimo joogto ah. 2006, waxaan lashaqeynay Machadka Cilmi baarista Qalabka Silicon Carbide si loo horumariyo walxaha kuleyliyaha carbide-ka cusub, waxaanan aqbalnay qalabka wax soo saarka cusub iyo teknolojiyadda ugu dambeysay ee wax soosaarka warshadaha, SICTECH brand silicon carbide waxyaabaha kululaynta ee aan soo saarnay ayaa macaamiisha si wanaagsan u soo dhaweeynay.
Waxaan soo saareynay alaab tiknoolajiyad sare leh oo tayo sare leh oo leh ruuxa hal-abuurnimo joogto ah.
SICTECH waxay bixisaa qeexitaanno kala duwan oo ah waxyaabaha kuleyliyaha carbide ee tayo sare leh: nooca GD (rod toosan), HGD (nooca tooska ah ee cufnaanta sare), nooca U, nooca W (seddex waji), nooca LD (hal xaraf), LS (dun laba jibbaaran) ) nooca iyo alaabada kale.
Nooca W (saddex waji) carbide kululaynta el ...
Nooca LD (hal muquuninta) kuleyliyaha carbide kuleyliyaha ...
Eeg dhammaan buugga
Laga soo bilaabo Nofeembar 1 illaa 3, 2019, 7th Taizhou International Electrothermal Technology and Exhibition Exhibition ayaa lagu qabtay Taizhou International Expo Center. Jiangsu Huaneng Silicon Carbon Ceramics Co., Ltd. waxaa lagu casuumay inay kaqeyb gasho ...
Haddii nooca albaabka silsiladda kaarboonku iska caabbinta way ka duwan tahay, marka taxaddarka taxanaha ah ee silsiladda xarkaha silsiladda silsiladda sare ay si aad ah isugu urursan tahay, ay fududahay inuu sababo iska caabin degdeg ah oo sii kordheysa ulaha kaarboon silicon, gaabin nolosha adeegga. Carbide Silicon guud ahaan waa taxane, isku midka ah con ...